ANKADINDRATOMBO : NAFANA NY AMBIASA TAMIN’NY FAMPIELEZANKEVITRY NY DR ROBINSON – MyDago.com aime Madagascar
ANKADINDRATOMBO : NAFANA NY AMBIASA TAMIN’NY FAMPIELEZANKEVITRY NY DR ROBINSON
Nifarana tao amin’ny kianjan’ny Ankadindratombo ny fampielezankevitra nataon’i Dr Robinson tamin’ity androany ity. Nafana hatrany ambiasy tao antoerana. Nisy hatrany ihany koa ny lahateny nifandimbiasa tamin’izany Ny Me Hanitra dia nanambara fa rehefa tsy mifidy dia manokatra lalana ho azy ireo ka hampiitatra ny tetezamita isika.Namafisiny fa efa niara niasa tamin’i dada ny Dr Robinson. Nanazava tamin’ny vahaoka ny fihetsika amin’ny alalan’ny tànana ihany koa ny tenany tamin’izany. Ramatoa Lalao Ravalomanana kos adia nanamafy ny efa voalazany tany Talatan’i Volonondry sy Sab Nam. Ny Dr Robinson dia nilaza fa teto Alasora no nitrangan’ny olona manampahaizana sy manana traikefa. Tamin’io fotoana io ihany koa no nampafahatarany ireo mpiaramiasa aminy rehetra. Natsidiny ihany koa ireo fandaharanasa izay ho entiny hampandros ny firenena. Ny filoha Ravalomanana izay niditra mivantana dia nanambara fa isika sty matahotra fifidianana. Ny fifidianana amin’ny 25 okotobra izao hoy izy dia tsy maintsy mandresy isika dia ny kandidantsika Dr Robinson izay favori. Noho izany hoy izy dia manantena anareo ny tenako. Nananfatra ireo mpitarika ihany koa ny tenany teto. Ataovy izay ampahafantarina ao anatin’ny fotoana fohy sy haingana ny kandidantsika Dr Robinson.
TALATAN’I VOLONONDRY : TOHIZANTSIKA NY LALANA HOY NY KANDIDA DR ROBINSON
Auteur Solo Razafy*Publié le 25 septembre 2013 Catégories Politique
5 pensées sur “ANKADINDRATOMBO : NAFANA NY AMBIASA TAMIN’NY FAMPIELEZANKEVITRY NY DR ROBINSON”
Tokony aparitaka : KANDIDA FOZA ORANA (HAJO, HERY, CAMILLE VITAL, ROLLAND RATSIRAKA, LAHINIRIKO, EDAGRD) = FRANTSAYA = FANJANAHANA = FAHANTRANA) = TETEZAMITA FADIO FA MPANIMBA FIRENENA
26 septembre 2013 à 8 h 30 min
nazaka olona betsaka noho i ROBINSON i Ratsiraka Roalan tao Antsirabe ,Mila hamafisina ny hestika any @ faritra .
Izahay tsy mba dia matahotra ny ho vokatry ny fifidianana satria miseho laniny izao fa na hangalatra aza ireo foza ireo tsy haharesy ny Zanak’i Dada. Zavatra roa ihany no tiana ho fantatry ny mpamaky. Tamin’ny Sabotsy teo dia nilamina be mihitsy ny tsena tao Ambodin’Isotry. Somary gaga avokoa ny mpiantsena. Inona moa no antony raha mahaliana anao ? Lasa nanao propagande avokoa ny mpanendaka sy ny Jiolahy rehetra fa any hono no misy vola azo maimaimpoana. Asakasak’izay mpizara vola hividianana ny vaton’ny vahoaka aloha, fa aminay dia tsotra ihany : « Premier tour dia vita »
MANENTANA ANREO AHO IFIDY NY IRAY @ IRETO KANDIDA IRETO HO FILOHANTSIKA MALAGASY FA IREO NO HANAVOTRA ITY FIRENENA ITY SADY TIA TANINDRAZANA: HAJO, HERY, CAMILLE VITAL, ROLLAND RATSIRAKA, LAHINIRIKO, EDAGRD…
3 octobre 2013 à 9 h 07 min
Asaivo mifidy iray, na ento ho an-dreninareo sy izay mitady ê ; amin’izay ry zareo tsy manky saosy sy vola ets…intsony !!!!
Mbô kôzy anie izany !
Précédent Article précédent : FILOHA RAVALOMANANA : TSY MAINTSY MANDRESY ISIKA
Suivant Article suivant : LALAO RAVALOMANANA : MILA VAHOAKA MANAO NY ADIDINY ISIKA